Forum Syd oo xafiisyo ka furaysa saddex goobood Soomaaliya - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Daar ka mid ah daarihii dhaadheeraa oo dayac tir lagu wado. Sawirle: .(AP Photo/Farah Abdi Warsameh)
Forum Syd oo xafiisyo ka furaysa saddex goobood Soomaaliya
Qurba-joogta ayaa ka howl-geli doonta
La daabacay fredag 12 december 2014 kl 17.30
Ururka daladda Forum Syd, oo sannooyinkii ugu dambeeyey ka howl-galayay goobo ka mid ah Soomaaliya ayaa sheegay inuu ku tallaab-san doono howl-kordhin wax looga qabaneyo sidii loo hagaajin lahaa xaaladda Soomaaliya ka aloosan. Middaasina loo adeegsaneyo qurba-joogta soomaalida reer Iswiidhen mashruucyo socon doona muddo saddex sannadood ah 2015-2017, sida ay sheegtay agaasimaha guud ee Forum Syd, Annica Sohlström oo ay wareeysi la yeelatay laanta soomaaliga ee Radio Sweden:
- Mashruucan ayaa ku saabsan sidii looga gacan siin lahaa soomaalida reer Iswiidhen oo xiriirka la leh ururrada ka jira Soomaaliya gudaheeda. Waxaan sidoo kale aan gacan u fidin doonnaa bulshada kuwooda la fal ama ka howl-gala dadyowga bulshada ugu liita ee dalkii Soomaaliya. Waxaan sidoo kale taageero u fidin doonnaa mashruuc la xiriira dhismaha iyo dib u soo nooleeynta nabadda ee Soomaaliya, sida aya sheegtay.
Mashruucan oo muddada uu socon doono ay tahay saddex sannadood ayaa kharashku ku bixi doona marka laga yimaado howlaha kale ee ururka Forum Syd ka wado Soomaaliya 45 malyan ee koronka iswiidhishka, waana dhaqaale u dhigma 15 malyan sannadkii.
Haddaba howlaha mashruucan lagu hir-gelin doono ayey ka mid yihiin saddex xafiis oo Forum Syd uu ka furi doono magaalooyinka Hargeeysa, oo noqon doonta xarunta ururka oo ey ka howl-geli doonaan laba shaqaale, magaalada Gaalkacyo oo ey ka howl-geli doonaan laba shaqaale iyo magaalada Muqdisho oo uu ka howl-geli doono hal ruux, sida uu sheegay gacan-yare mashruuc, Saif Omar oo ka howl-gala Forum Syd oo nooga warramayay sababaha lagu doortay goobahaa:
- Waa goobo aannu muddaba ka wadney mashruucyo kala duwan. Waa goobo aannu siyaabo kala duwan uga soo howl-galeeyney laga soo bilaabo 1994. Waxayna noqon doonaan xarummo dhexe ee laga fuliyo dhammaan howlaha uu ururka daladda Forum Syd uu ka fuliyo dalka gebi ahaan, sida uu sheegay Saif Cumar.
Qorshahan oo ay dhumucda hoowlihiisa fulin doonaan qurba-joogta soomaaliyeed ee reer Iswiidhen ayaa haddana tiirarka uu ku taagan yahey ey yihiin saddex qaybood, sida ay sheegtay Annica Sohlström, agaasimaha guud ee Forum Syd:
- Urur-dalaadeedka Forum Syd wuxuu leeyahay saddex tiir oo howlihiisa astaan u ah, kuwaasina oo kala ah: nidaamka talo-wadaagga ku dhisan ee dimoqoraadiyadda iyo xuquuqda. Su'aalaha la xiriira sinnaanta iyo howlaha ku xiriira cimilada iyo dabeecadda. Waana hoowlo saameeyn doona dhammaan mashruucyada qorshahan saddexda sannadood socon doona, sida ay sheegtay Annica Sohlström.
Bartamihii sannadkii tagay 2013 ayay ahayd kolkii uu ururka dhakhaatiirta aan xadka laheyn uu albaabbada dhammaan u soo wada laabey howlihii uu ururkaasi ka waday Soomaaliya 22-kii sannadood ee ugu dambeeyay, middaasina lagu macneeyey dhanka ammaanka iyo iney halis ku tahay howl-wadeennada dar-yeelka caafimaad ee goobahaasi ka howl-galayey iyada oo qaar ka mid ey naftooda ku waayeen, qaar kalena ey dhibaatooyin iyo handadaad ka soo gaareen. Haddaba waa maxay aragtida ka dambeeysa in ururka daladda Forum Syd uu ku dhiirado inuu ku tallaabsado sidii xafiisyo looga furan lahaa Soomaaliya. Saif Cumar iyo mar kale:
- urur-daladeedkanu maahan mid ku howl-gala taagerada manaafacaadka, waxa loo yaqaanno humaitarianka. Hase yeeshee waxaannu eegi doonnaa ammaanka shaqaalahayaga iyo sidoo kale ururrada goobahaa ka howl-geli doona. Waxaannu tirsaneeynaa waayo-arag-nimada iyo aqoonta katiyeed ee qurba-joogta soomaalida ee reer Iswiidhen. Maadaama uu yahay mashruuc loogu talo galey sidii loo siin lahaa qurba-joogta soomaalida reer Iswiidhen qudhooda, sida uu sheegay Saif Cumar:
- urur walba isaga ayaa qiimeeya xaaladdiisa. Hab fikirkayaga ammaanka iyo miisaaniyaddana waxay qaadan doontaa qayb ballaaran oo ka mid ah sugidda ammaanka. Sidoo kale annagu uma howl-galno sidii ururka dhakhaatiirta aan xadka laheyn:
- Waxaan la shaqeeyn doonnaa qurba-joogta soomaalida reer Iswiidhen oo aqoon ballaaran carrigaa u leh. Sidoo kale waxaannu ka howl-geli doonnaa goobaha aannu is-leenahey halistu aad bay uga hooseeysaa, sida uu sheegay gacan-yare mashruuc, Saif Cumar ee ururka daladda Forum Syd.
Annika Sohlströn, ahna agaasimaha guud ee Forum Syd ayaa sheegtay inay rajo-wayn tahay iney gaari doonaan goolka mashruucan laga leeyahay iyo sidii gacan looga geey-san lahaa in Soomaaliya dib loo soo nooleeyo, inuu noqdo waddan ammaan iyo dimoqoraadiyad ku dhisan. Isla-markaasina uu mashruucani gacan ka geeysto howlahaa.